ချောင်းဆိုးတာ သွေးပါ လို့ဆိုပြီး ဆရာဝန် သွားပြလိုက်မှ လည်ချောင်းထဲမှာ 3CM လောက်ရှည်တဲ့ မျှော့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး
တရုတ်ပြ ည်မှာနေ ထိုင်လျ က်ရှိတဲ့ 65 နှစ်အ ရွယ်အ မျိုးသမီးတ စ်ဦးဟာ သူမ၏လ ည်ချောင်းထဲမှာ တစ်စုံတစ် ခုခံနေသလို ခံစားနေရချိ န်မှ စတင်ပြီးချောင်ဆိုး တိုင်းသွေးများ ထွက်နေခဲ့ပါ တယ် ။ နောက်တော့ ဆရာဝန်သွားပြပြီး လည်ချောင်းထဲကို စစ်ဆေးကြည့် လိုက်တဲ့ချိန် မှာတော့ သူမရဲ့ အသံအိုးနားမှာ
ဒေါ်လာ(၁)ဒသမ (၅)ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ ဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေး ဝယ်ယူမည့် အစီအစဉ် သမ္မတ ဒေါ်နယ် ထရမ့် ကြေညာ
ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် ကာ ကွယ်ဆေး အလုံးရေ သန်း ၁၀၀ ဝယ်ယူမည့် ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ တန်ကြေး ရှိ သဘောတူညီ ချက်တစ်ရပ်ကို အမေရိကန် ဇီဝန ည်းပညာကုမ္ပဏီ မိုဒန်နာနှင့် လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ပြီး မေလ နောက်ပိုင်း ဆဌမမြောက် သဘောတူ ညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဟု
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ကို ရုရှား မှတ်ပုံတင် အတည်ပြုလိုက်ပြီ
Shwe | August 11, 2020
သြဂုတ် – ၁၁ ၊ ၂၀၂၀ ရုရှား ၏ ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ် စ် ကာကွယ်ဆေး ကို ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာန က ထောက်ခံ အတည်ပြုကြောင်း သမ္မတ ပူတ င်ကြေညာ။ ၎င်း၏ သမီးလေး မှာ ကာကွယ် ဆေးထိုးနှံပြီးဖြ စ်
နာရီ ပေါင်း (46) နာရီကျော်ကြာ သည် အထိ မနားတမ်း စံချိန်တင် အနမ်းပေး နိုင်ခဲ့တဲ့ စုံတွဲ
ထိုင်း နိုင်ငံမှ စုံတွဲတ စ်တွဲဟာ 46 နာရီ ၊ 24 မိနစ်ကြာ သည် အထိ အနမ်းပေး ခဲ့ကြလို့ အချိန်အကြာဆုံး “kissing” ပေးနိုင်ကြတဲ့ စုံတွဲအြ ဖစ် စံချိန်တင် သွားခဲ့ပါတယ် ။ Guinnes World Records မှာ တကယ့်တ ရားဝင်စံချိန် တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
သမီးဖြစ်သူကို တွေ့ချင်လို့ အိမ်ကနေ လမ်းလျှောက်ထွက် လာရင်း တရုတ်နိုင်ငံ အထိေ ရာက်ရှိသွားတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက အမျိုးသမီး (ရုပ်/သံ)
ထိုင်းနိုင်ငံ မှာနေထို င်တဲ့ အသက် 59 နှစ်အရွယ် ဦးနှောက် ချို့ယွင်းနေတဲ့အ မျိုးသမီးဟာ သူမအိမ်ရဲ့အနီးဝန်း ကျင်မှာနေထို င်တဲ့ သမီးဖြစ် သူကိုအလည်သွားဖို့ အိမ်ကနေထွ က်လာရင်းနဲ့ 8 လအကြာ မှာတော့ တရုတ်နို င်ငံအထိရောက်ရှိ သွားခဲ့ပါတယ် ။ Kaeomanee Arjaw အမည်ရှိတဲ့ အမျိုး သမီးဟာ
မိုး အဆက်မပြတ် ရွာသွန်းမှု ကြောင့် တရုတ်ပြည် က ကမ္ဘာ့အကြီး ဆုံးဆည် ၏ ကြံ့ခိုင်မှု စိုးရိမ် စရာဖြစ်လာ
တရုတ် နိုင်ငံတွင် အဆက်မပြတ် မိုးရွာသွန်းပြီး ယန်စီမြစ်ရေဆ က်လက် မြင့်တက်ေ နမှုကြောင့် ကမ္ဘာ့အကြီး ဆုံးဆည်ကြီး (Three Gorges Dam) ၏ ခံနိုင်ရည် ဝန်အား အတွက် စိုးရိမ်စ ရာဖြစ်လာသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ရက် သတ္တပတ် အတွင်း မိုးအဆ က်မပြတ်ရွာသွန်းခဲ့ရာ ဆည်ကျိုးေ ပါက်မည့် အန္တရာယ်ရှိသည်
ပုဇွန်တွေ ထဲမှာ အ စားထိုး အသားတု တွေ ထည့်နေကြတာ ကို ဝင်ရောက် စစ်ဆေးရင်း တွေ့ရှိ အရေးယူ (ရုပ်သံ)…ယုတ်မာ လိုက်ကြတာ
Shwe | July 27, 2020
အစားအေ သာက် အဆိပ် သင့်နေကြပြီလား လူသားတွေ…. ကြက်သားရောင်းတဲ့ သူတွေဟာ ကြက်ကေ လးတွေ အမြန်ကြီးထွားဖို့ ၃ ၄ လလောက်စောင့် မယ့် အစား အမြ န်ကြီးထွားစေတဲ့ ဟော် မုန်းဆေးတွေ သုံးကြတယ် ၊အဲ့ကြက်သေကို တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းတဲ့ ကြက် သားသည်က ဓာတုဆေး တစ်မျိုးထိုး လိုက်တော့ ကြက်သေကြီးက
ကိုဗစ်သတင်းတွေ ရှေ့နောက် မညီ တဲ့ မြောက်ကိုရီးယား မှာ တကယ် ကူးစက်သူ သောင်းနဲ့ ချီ ရှိနေပြီလား?
Shwe | July 26, 2020
မြောက်ကို ရီးယား က ကေဆောင် မြို့ကို လော့ဒေါင်း ချလိုက် ပါတယ်။ ကိုဗစ်ရောဂါ လက္ခ ဏာပြနေတဲ့လူနာကို သောကြာနေ့ နေ့လည်က အဲ့ဒီမြို့မှာ တွေ့ရလိြု့ ဖစ်တယ်လို့ KCNA မြောက်ကိုရီး ယားသတ င်းဌာနက ကြေညာသွားပါတယ်။ အဲ့ဒီလူဟာ လွန် ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ် လောက်က တောင်ကိုရီးယားကိုထွက်ပြေးသွားသူဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လထဲမှာ
တရုတ်ပြည်သူတွေ ဂုဏ်မယူ ခဲ့တဲ့ ယန်ဇီမြစ် ပေါ်က မြစ်ကျဉ်း သုံးသွယ် ရေကာတာကြီး (THREE GORGES DAM) ကျိုးပေါက်ခဲ့ပါလျှင်
မြစ်ကျဉ်း သုံးသွယ် ရေကာတာကြီး ကျိုးပေါက် ခဲ့ပြီးတဲ့ နောက် မီတာ ၁၀၀ နီးပါး မြင့်တဲ့ရေထရံကြီး ရုတ်တရက်ပေါ်လာ မယ်။ မြစ်နှစ်ဖက်စလုံး မှာ မတ်စောက်တဲ့ တောင်တန်းတွေရှိနေ တာကြောင့် ရေတွေက ဘေးဘက် ကို မဖြန့်ကြက်နိုင်ပါ ။ ဒီအဆင့် မှာ ရေလွှမ်းမိုးမှုနှုန်းဟာ တစ်နာရီ မှာ ကီလိုမီတာ
ဂျပန် ကမ်းလွန် မှာ လာပီး သောင်တင်လာတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား အလောင်းတွေ ပါတဲ့ တစ္ဆေ သင်္ဘော
Shwe | July 25, 2020
ပြီးခဲ့ တဲ့နှစ် တွေ အတွင်း ဂျပန်နို င်ငံမြောက် ဘက်ကမ်းခြေ မှာ မြောက်ကို ရီးယား နိုင်ငံသားေ တွ ရဲ့ အလောင်းတွေ ပါတဲ့ ငါးဖမ်းစက် လှေပျက် တွေ ကမ်း လာလာ တင် တတ် တယ် ။ ၂၀၁၇ က မြောက် ကိုရီး